डोनाल्ड ट्रम्पको उदय: अमेरिकामा भन्दा नेपालमा बढी असर
बासु श्रेष्ठ -
डिपोर्टेशनमा परेका केहि नेपालीहरुको केहि उदाहरण दिन चाहन्छु। झण्डै एकवर्ष अमेरिका बसेर नेपाल गई केहि महिनापछि छोरीको सुत्केरी स्याहार्न भनेर फेरि अमेरिका आएका दम्पतिमध्ये श्रीमानलाई डिपोर्ट गरियो। किनभने अमेरिकामा ति श्रीमानको उपस्थिति ति अधिकारीलाई स्वभाविक लागेन। त्यस्तै, केहि वर्ष अमेरिका बसेर नेपाल गई पाँच छ वर्षपछि अमेरिका आउँदा तिनको सुटकेशमा विभिन्न व्यापारिक उदेश्यका कागजपत्र फेला परेपछि तिनको ‘घुम्न आउने’ भनाईसँग बाझिएकोले डिपोर्ट गरियो। गत वर्षमात्र आई २० मा आएका मेरा चिनजानका एकजनालाई डिपोर्ट गरिएको थियो।
'नआऊ मेरो सामु तिमि, मैले छोएको पानी चल्दैन...'
जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यसले दलित समुदायको हित हुने कामहरु गर्न सकेको छैन। दलित समुदायले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य अधिकार पनि पाएका छैनन्, ऐन कानुनमा लेखिएका अधिकार पनि लागू भएका छैनन। दलित समुदाय नेपाली राज्यबाट ठगिँदै आएका छन।
प्रवासमा ८ महिने नेपाली वालकको मृत्युले ल्याएको तरंग
ठ्याक्कै नाम जस्तै 'अविरल' कहिल्यै नखुल्ने गरी निदाएका आँखाले धेरै प्रश्नहरुका वर्षात गरीरहेका थिए। निर्दोष अनुहार उठेर बोलिहाल्छ कि जस्तो देखिने त्यो ८ महिने बालकको त्यो बाकस भित्र कैद मृत शरीरका तस्बिरहरुले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल भरिए। धेरै अनलाइन खबरमा ती तस्बिरहरु नियालेकी थिए मैले। सबै भन्दा पहिला त त्यो समाचारको हेडलाइन मेरो आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। ८ महिनाको नेपाली नानीको पोर्चुगलको स्कूल मा निधन, 'आठ महिना' या आठ वर्ष म पूर्ण रुपमा कन्फ्यूजनमा परे, समाचार खोलेर पढे त्यहांका तस्बिरहरु नियाले म स्तब्ध बने अरु जस्तै।
म अङ्रेजिमा लेख्न नजान्ने, तिमि नेपालीमा लेखेको नबुझ्ने...
सुजाता ढुंगेल -
मलाई अमेरिकाका ठुला ठुला घर, अनी मोटर गाडी हेर्ने रहर थिएन। मलाई त पहिला नेपालमा हुंदा जस्तै मेरो सानो निर्वाणलाई समातेर वस्ने रहर मात्र थियो। तर सबै कुरा सोचे जस्तो कहाँ हुंदोरहेछ र! तिमी हुर्केर ठुलो एघार बर्षको भएछौ। स्कुलबाट आएपछी 'आमा खाजा खान्छु भोक लाग्यो' भनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर तिमी नबोली आँफै फ्रिज र प्यान्ट्रीबाट खाजा झिकेर खांदै धेरै जसो कम्पुटरमा खेली बस्ने भएछौ।
रविन्द्र मिश्रले सुरु गरेको 'साझा पार्टी'का चुनौतीहरु
कृष्ण पौडेल -
कुशलता सापेक्षित हुन्छ, नेपालका राजनैतिक नेतृत्व वर्ग कतिपय दृष्टिले अकुशल भए पनि आफ्नै सन्दर्भ कुशल र चतुर छ। नेता भएर नै जन्मेका होइनन, संघर्ष गरेरै राजनीतिमा टिकेका छन नेता भएका छन। मिश्रजी परोपकारी राजनीतिको चर्चा गर्नु हुन्छ तर नेपाली समाज विशेष सामाजिक संरचना र मानसिक संस्कारको कारण परोपकारी राजनीतिको होइन उपकारको राजनीतिको लागि ज्यादा उर्वर छ।
दिपक, तिमी मर्द की नामर्द?
रीश्मा थापा -
चिटिक्क परेको शरिर, हरक्षण ओठमा मन्द मुस्कान, गाजलु आँखा ....मोरी लोभलाग्दी नै छे। 'ओई यतिविधी राम्री नबन न मलाई इष्र्या नै लाग्यो भन्या' घरी घरी म उस्लाई जिस्काउँछु। ऊ पुर्वेली म पश्चिमेली, पेशाले अस्मिता बैंकर हो म शिक्षिका तर हामीबीचका धेरै भावनाहरु मेल खान्छन्। त्यसैले पनि होकी यति धेरै माया मोह। शनिबार आयो की त मेरो कोठमा नत्र उसको कोठामा अड्डा जम्थ्यो हाम्रो। कुरै नसकिने के।
नेपालीलाई अमेरिकामा बस्नुको मजै अर्को
अफिसमा बसी घरि घरि फ़ेसबुक हेर्नुको मजै अर्को ।
फ़ेसबुकको फ़ोटो हेर्दै नहेरी लाईक गर्नुको मजै अर्को ।
७५ वटा देशमा फैलिएर नेपालमा २९ अर्व लगानी गरिरहेको एनआरएनलाई आउनुस अझैं बलियो बनाउ
आर्थिक पत्रकारको संस्था सेजनले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नौ जिल्लामा मात्र सन् २०१४ को अन्त्यसम्ममा करिब २९ अर्ब ८५ करोड लगानी भएको देखिएको छ। उनीहरूको सो लगानीबाट करिब आठ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको मानिन्छ। वि स २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका वेला पनि नेपालमा आएर राहतको काममा खटिएर सबैको मन जितेको एनआरएन आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप ‘हजार घर बनाउने’ अभियानमा लागेको छ।
म सबैकी साझा आमा हुँ, कसैकी पेवा होईन
म कसैकी पेवा आमा हैन, म हुँ तिमीहरु सबैकी साझा आमा। सबै सन्तानले इज्जतका साथ मेरो काखमा लडिबुडी खेल्न पाउनु पर्दछ। यो तिमीहरु सबैको हक हो। तर दूर्भाग्य, तिमीहरु मध्येका कसैले मेरो माया र ममताको अनुचित फायदा लिई मेरो पुर्ब मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म फैलिएको शरिरका आधा जसो गहनाहरुको चोरी गरी आफुलाई सम्पन्न बनाएको देखेकी छु मैले। त्यही भित्र इमान्दारीपूर्वक मेरो सेवा गर्नेहरुलाई भने दुई छाक खान, बस्न र शरिर छोप्न समेत कठिन भएको पनि मैले देखेकी छु। तिम्रो आमा तिम्रै सम्पती हैन र? आखिर चोरी गरी आफ्नै परिवारको पेटमा छुरा रोप्न किन तल्लिन छौ? म त्यो बेला आफु लाई धन्य ठान्ने छु जब तिमीले चोरेका र हिनामिना गरेका ती गहनाहरु मलाई फर्काउने नैतिक दायित्व पुरा गर्ने छौ।
किन चाइनाको इन्टरनेट सेवा पश्चिमका मुलुकहरु भन्दा छिटो दौडिदै छ?
बिबिसी, डेभिड रोब्सन -
चाईनाको इन्टरनेटका बारेमा लेखिएका लेखहरुमा प्राय त्यहाँको ठुला ठुला शहर र कुलिन वर्गका बयान हुन्छन। त्यसैगरी इन्टरनेटमा सरकारी सेन्सरसिप, नियन्त्रण र जर्ज अरवेलको १९८४ मा बयान गरिए जस्तो उदास स्थानको रुपमा चित्रित गर्ने कुरामा बढि केन्द्रित हुन्छन्। तर जब म्याक्डोनाल्डले आन्सानको नबिन र जीवन्त अनलाइन संसार देखे उनि त आश्चर्यमा परे। उनले भने ‘हामि चाइनाको इन्टरनेट ढिलो र दिक्क लाग्दो अनि निश्चित ठाँउमा मात्रै होला भनेर सहजै अड्कल काड्छौ। वास्तविकता अर्कै छ, यहाँको इन्टरनेट एकदम सृजनशिल र जीवन्त छ र प्रयोगकर्ताहरु पनि उत्तिकै। यो एक अनलाइन मेला जस्तै लाग्छ।’
रेडियोमा बजेको अन्तिम समाचार
डा. गोबिन्द रावत -
अचानक सचिवको कोठामा उनका स्वकीय सचिव अत्तिदै पसेर मलाई हेरेर 'रेडियोले के भनेको हजुर, राजतन्त्र फर्किदै छ रे नि, ड्राईबरले भर्खर सुनेको रे' भनेपछि म के भयो भन्दै उठे। मसँगै सचिवज्यु मतिर हैर्दै जुरुक्क उठेर मलाई साध्नु भयो, के भनेको यो?
सामाजिक संजालमा ‘मृत्युको’ खवर राख्दा आफन्तीको बारेमा सोच्ने कि?
वसन्त आचार्य -
सेतो लुगामै छुट्टै कोठामा वसेर एसएलसी दिएँ। बा मर्नुजस्तो ठूलो पिडा जिवनमा के होला र, तै पनि मन वहकिएन। दुइ जना ठूला दाजुहरु भक्कानो छोडेर रोए। म रोइन। दाजुहरु टाढा थिए। आउन पाएनन जुन दिन आइपुगे त्यो दिन खप्न सकेनन। भक्कानो छोडेर रोए। बाको मृत्यु मेरा आँखा अगाडी भयो। सबैथोक मेरा अगाडी भयो। मन दह्रो भयो। ‘एसएलसी पास भइनस भने मेरो इज्जत रहँदैन’ भन्ने बाका शब्दहरु आँखा अगाडी घुमे। ‘गाउँलेले जे सकै भनुन, छोरो एसएलसी दिन जान्छ।’ भनेर आमाले समाजसँग बिद्रोह गरिन।
नीता दाहाल -
केटाको परिवारमा नयाँ बुहारी आएर आफ्नो छोरा, दार्इ वा भाइलार्इ आफूहरूबाट टाढा लाने हो कि भन्ने असुरक्षाको भाव लुकेर बसेको रितीले धेरै देखेकी छ कि। उसलार्इ लाग्छ शायद यस्तैअसुरक्षाबाट बच्नका लागि अन्य परिवारजनले पतिपत्नी वीचमा फाटो ल्याउने गरेका होलान्। यसले गर्दा केटाहरू केही व्दिविधामा पर्नपनि सक्छन् को सही को गलत भनेर।तर उसको विचारमायस्तो वेलामा त्यो श्रीमतिलार्इ आफ्नो श्रीमान् को अझै दह्रो साथ चाहिन्छ। अनि खाँचो हुन्छ तआपसी विश्वास र मायाँको। आखिर त्यही श्रीमान् मात्रैत हुन्छ त्यो नयाँ परिवेशमा उसलार्इ राम्रोसँग चिन्ने र मनको कुरा गर्नसक्ने।
'जोगिरा स र र र...' मा फष्टाएको बिकृती
होली अर्थात रङ्गहरूको पर्ब आज अमेरिकामा पनि प्रबाशी नेपालीहरु मनाउदै छन। नेपालमा होली पर्ब दुई दिन मनाईन्छ। पहाडी क्षेत्रमा पुर्णिमा का दिन होली मनाईन्छ भने तराई मा पुर्णिमाको भोली पल्ट मनाईन्छ। बसन्त ऋतुको आगमनकोसुरुवातमा पर्ने फागु पर्व होली एक आपसमा मैत्री भाव प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भई रङ्ग दलेर मनाइन्छ। प्रह्लाद र होलिका अनि श्रीकृष्ण र गोपिनीहरूको धार्मिक प्रसङ्गबारे चासो नदिने नयाँ पुस्ता समेत रङ्गहरूको यो पर्वमा रमाइरहेकोदेख्न पाइन्छ।
डोनाल्ड ट्रम्को उदयले कुनै असर परेको छैन हामीलाई
कृष्णराज खनाल -
गुन्द्रुक पनि सरासर पास भयो। वेसार र मसलाहरु थिए, लप्सीको अचार थियो, दाल चामल थियो, नुन र खुर्सानीका पोका थिए, लाखामरिदेखि गुदपाकसम्मका यावत् नेपालीहरुलाई मन पर्नें र प्रायशः नेपालीहरुले ल्याउने यस्ता चीजहरुका अलावा विवाह र पास्नीका सरसामानहरु, सुनका गरगहनाहरु सुटकेसको कुनाकुनामा यत्रतत्र छरिएर रहेका थिए। तर अहँ, कहीँ कतै रोकावट भएन। ती सबै उत्तीर्ण भए। हाम्रो रुप र रंग हेरेर कुनै सम्वद्ध अधिकारीले हामीलाई सोधखोज गरेनन्। हाम्रो सुटकेस र हाते झोला खोतलेनन्। उनीहरुले आफ्नो काम यथारुपमा गरिरहेका थिए। हामीलाई सरासर आउन र जानका लागि उनीहरुले हाम्रो धर्म र राष्ट्रलाई आधार माने कि मानेनन् त्यो त हामीले बुझ्ने कुरा पनि भएन तर जसरी सहज रुपले हामी नेपाल छिरेका थियौँ, त्यसरी नै हामी अमेरिका भित्रियौँ।
झलक पौडेल -
यसपाली पनि मेरो होली सुरु भएन किनकी मेरो निधारमा टिका लगाईदिदै होली सुरु गर्ने बुवा मबाट टाढीएर मैले नदेख्ने अनी नभेट्ने ठाउँमा गईसक्नु भएको थियो। शायद अब कहिलै नि मेरो होली सुरु हुँदैन होला। पोहोर साल घरको ढोकासम्म आएर जिस्काएको होली यसपाली घरको वरी-परी, छेउ-छाउसम्म पनि आएन, त्यसैले म होली खेल्न बाहिर गइनँ।
साढे पाँच लाख!
विनोद भण्डारी -
‘हेर्नुस् समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नु हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो। जहाँ सवैकुरा समान हुन्छन्। कोही ठूलो सानो हुँदैन, कुनै जात भात हुँदैन, कोही धनी गरिव हुँदैन। धनि गरिवको असन्तुलन मेटिन्छ किनभने समाजवादमा हरेककुराको उत्पादन र वितरण समाजको अधिनमा हुन्छ, राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। अहिलेको जस्तो केही धनाढ्यहरुको नियन्त्रणमा हुँदैन। सवैले एउटै अवसर पाउँछन्।’ यस्तो कुरा गर्दा मेरो नेताले क्या गजव वोल्यो भनेर मज्जाले ताली बजाएको उस्ले बल्ल सम्झियो। वितेको पाचँ वर्षमा काठमाडौंबाट हरिशंकर फर्केर आफ्नो गाउँ गएको रमेशले कहिल्यै थाहा पाएन।
सुगाैलि सन्धिकाे बैधता समाप्त भइसक्याे!
युवराज पाण्डे -
सन् १९५० को जुलाई १ मा नेपाल र भारतले एउटा शान्ति तथा मैत्री सन्धी गरेको छ। यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट संग ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन्’ भनिएको छ। त्यसैले सुगाैलि सन्धिकाे बैधता अब समाप्त भइसक्याे।
वीरेन्द्र कटवाल -
‘जब मैले सरिताजीको लागि ‘नइन्द्र’ भन्ने एउटा काल्पनिक पात्र खोजँे । मलाई त्यो पात्रसित सारै रिस उठ्यो ? उसका बिभिन्न रूपहरू मेरो मगजमा नाच्नथाले । सरिताजीसित कुनै तेश्रो व्यक्तिको निम्ति विबाहको प्रस्ताब लिएर जाने कुराले म आफैसित आफैलाई रिस उठ्यो ।
एनआरएनलाई राजनीतिक दलको इसारामा नचाउन वन्द गरौं
अनिल पाण्डे -
अमेरिकामा आएर यहाँको नागरिकतासमेत प्राप्त गरिसकेका नेपालीले आज पनि नेपालका राजनीतिक दलको पछि लाग्ने र उनीहरुकै पृष्ठपोषणका लागि एनआरएनए हुने संकीर्ण चिन्तन पालेको पनि देखिन्छ। त्यसैले आम गैरआवासीय नेपालीको हितमा समर्पित नेतृत्व जो अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसँग साच्चिकै गुणात्मक प्रतिस्पद्र्धा गर्नसकोस्, त्यस्तो नेतृत्वको चाहना स्वाभाविक हुन्छ।
गोविन्द तिमीले गल्ती गर्यौ
बिष्णु पौडेल -
तिम्रो शहादतलाई पार्टीकरण गरियो। धन्य मेरो देश। अब गोबिन्द गौतम भन्दा पनि फलानो पार्टीको कार्यकर्ता भनेर तिम्रो पहिचान गराउने होड वाजी नै चलेको छ। गोलीको शिकार मात्र होइन लाश माथी गरिने राजनितीको शिकार भयौ तिमी। कोही वोलेनन् जति वेला तिमी गोलीको शिकार हुदै थियौ। तिमी मर्दै गर्दाको चित्कार सुन्ने कोही भएनन्। ढलेको तिम्रो शरिरमाथी पार्टीको झण्डा ओढाउनको लागि तछाड मछाड गर्दैछन् दलका नेताहरु।
मनमा नेपाल नेपाल छ
डा. कृष्ण पन्थी -
नेपाली भई जन्मियौ र तिमीले कुल्च्यौ नि माटो जब ।
छायो उत्सब त्यो सबैतिर बहुत् आमा खुसी थिन् तब ॥
ताते गर्न सिक्यौ हिड्यौ चउरमा रम्दै अहो ख्याल छ ।
छोडयौ देश तिमी तथापि मनमा नेपाल नेपाल छ ॥१॥
के नारीले मात्र संस्कारी बन्नुपर्ने हो?
केटा मान्छेहरु सँग खुलेर बोल्ने एउटी केटीलाई चरित्रहिन को संज्ञा दिने हाम्रा संस्कारी समाजका भलाद्मीहरुको सोच देखेर कहिलेकांही दया लागेर आउँछ मलाई। रातको अँध्यारोमा एउटी बेस्यासँग होटलमा सकेसम्म शुखद अनुभूति लुटेर दिनको उज्यालोमा उसैलाई कतै देखे छी छी र दुरदुर गर्दै मनपरी गालि गर्दै हिड्ने हाम्रा नेपालका बोक्रे आदर्शबादीहरुलाई कहिलेकांही सोधौं सोधौं लाग्छ के संस्कार भन्ने कुरा केटी मान्छेमा मात्र निहित हुन्छ र हुनुपर्छ? के तिमी दुई चार पुरुष बिना कुनै एउटी नारी बेस्या बन्न सक्छे? मलाई थाहा छ यसको कुनै उत्तर छैन किनकि हाम्रो नेपालमा यौनका कुरालाई कहिल्यै कसैले पनि सहज रुपमा लिन सक्दैनन। किनकि त्यो हाम्रो संस्कार भित्र पर्दैन।
आँगन, संसार, र मेरो जात
तुलसीप्रसाद दाहाल - सानो छँदा म सोच्दथें मेरो आँगनको घेरा नै मेरो पुरै संसार हो आँगनमा मेरो मात्रै हैकम छ भनि ठान्थें हैकम नमान्ने जो कोहिलाई लाट्ठी गुलेलीले हान्थे म आँगनमा मेरै दब-दबा मेरै साम्राज्य होस् भन्थे म आँगनलाई असाध्यै माया गर्थे अहिले अलिकति उमेर ख...
जानुका खतिवडा ज्ञवाली -
आफ्नै बुबा संगको जबर्जस्ति सम्बन्धका हरेक पल कस्ता थिए होलान? कसरि कसैलाई केहि नभनी चुपचाप सहन सकेकी थिई होला मेरी दिदीले? साएद, यी सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिदीको मनमा पनि जीवन्त अनुत्तरित नै रहनेछन। न त उसको प्रश्न सुनिदिने कोहि हुनेछ न त उत्तर भनि दिने नै।
सामाजिक संजालमा हल्ला गर्न कति हतार हुन्छ हामीलाई?
युएई, जे.सागर -
लाशसँग सेल्फी खिचेर कसलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छौं हामी? आफ्नै मृत्युको झुठो खबर फैलाएर बटुलेको संवेदनाको लोकप्रियताको कुन उचाइमा पुर्याउला हामीलाई? जल्दै गरेको लाश,छ्ट्पटाउँदै गरेको घाइते, ड्ढ्दै गरेको बस्ती,लड्दै गरेको बस,रेटिंदै गरेको पशु, लुटिंदै गरेकी अवला, आदिको दर्दनाक र बीभत्स दृश्य देखाउन तँछाडमछाड गरेर आफूलाई के प्रमाणित गर्न चाहन्छौं हामी? त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिक्रियाले कुन चरम सन्तुष्टि मिल्छ हामीलाई?
निसास्सिदो राजधानी र बाहिरिएको एक दिन…
शिरीष रानाभाट -
सिर्फ एकदिनका लागि
उन्मुक्ति चाहन्छु म यो राजधानीबाट
यो धुलोबाट/यो धुवाँबाट
यी अविरल र कर्कश आवाजबाट
अनि यो भीडबाट
सडकका यी खाल्टाबाट
खुट्टा टेक्न नमिल्ने सडकका यी पेटीबाट
अझ त्यो भन्दा बेसी
चम्चाहरुको जालबाट …
कुमार पन्त -
आफैं लगानी गर्ने र आफैं काम गर्ने बातावरण एनआरएनमा भित्राउन आवश्यक छ । अहिले हामीले लाप्राकका लागि नमुना बस्ती, एनआरएनको आफ्नै विल्डिङ्ग, एनआरएनको सामुहिक लगानीअनूरुप आएको हाइड्रो आदिमा विदेशमा रहेका सीपयुक्त मानिसलाई मात्र अवसर दिने योजना अघि सार्नुपर्दछ । ताकि उसको लगानीपनि त्यसमा हुने र काम पनि तसर्थ स्व–रोजगार योजनाको वातावरण तय गरियो भने ब्रेन र ट्रेन दुवै भित्राउन हामी सफल हुनेछौं।
पहिलो चोटि छोरी हुनुको महसुस
आफूले उच्च मध्यम वर्गिय परिवारमा जन्मन पाएकोमा उ खुसी थिर्इ। समाजको परिवेश छोरीहरूले केही गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासबाट टाढा भएपनि बेलावेलामा केही पुरूष शिक्षकहरूबाट केटीहरूको दिमाग अलिकम हुन्छ र उनीहरूले राम्रो पढ्यो अनि केरियर सक्सेसफुल भयो भने त्यसले झन् घर र बाहिरको कुरा धेरै गर्नुपर्छ भन्ने भए पनि त्यस्ता कुरालार्इ रितीले खासै वास्ता गर्दिन थिर्इ । ऊ आफ्नो रफ्तारमा आफ्नो उचार्इ प्राप्त गर्दै थिर्इ ।
लोग्ने अनि बाध्यता
भिनाजुले पार्वती दिदीलाई सधै पिटेको देखेकी थिइ सिमानाले। ‘छोरा नजन्माएको’ भनेर सधै यातना दिईरहन्थे उनी। भिनाजुको उग्र रूप देखेर कुनामा घन्टौसम्म लुकेर बस्थी सिमाना। दिदी असल थिइन् आँखैमा राखे पनि नबिजाउने तर लोग्नेको ज्यादती र अन्यायको बिरोध दिदीले कहिल्यै गरिनन्। दिदी भन्थीन् ‘उहाँको स्वभाव नै त्यस्तै हो नानी!’ म सहनसिल छु भैगो नी।’